ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा ४ अर्बभन्दा बढी, ईपीएस कति ? – उज्यालो खबर
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा ४ अर्बभन्दा बढी, ईपीएस कति ?
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड GBIME ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार सो अवधिसम्ममा बैंकले ४ अर्बभन्दा बढी खुद नाफा कमाउन सफल भएको छ।
गत असार मसान्तसम्ममा बैंकले ४ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१।८७ प्रतिशत बढी हो। खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेपछि बैंकको खुद नाफा बढ्न पुगेको हो।
सो अवधिसम्ममा बैंकको वितरण योग्य मुनाफा २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९।४७ प्रतिशत बढेको छ भने नेट फि तथा कमिशन आम्दानी २४।२८ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा समीक्षा अवधिमा ३८।०५ प्रतिशत बढेको छ।
खुद नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी ३ रुपैयाँ ७५ पैसा बढेर १९ रुपैयाँ ८ पैसा पुगेको छ। सो अवधिसम्ममा बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १५१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २३।१२ गुणा रहेको छ।